The kasị akpali Obodo Food Iji Gbalịa Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > The kasị akpali Obodo Food Iji Gbalịa Na Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/02/2020)
Mgbe ọ na-abịa a Afrika ka ọdịbendị dịgasị iche dị ka Europe, ị nwere ike nzọ na gastronomic omenala ndị dị nnọọ ka dịgasị iche iche! Ọ bụrụ na ị na-na na njikere aka gị ike ala nile di iche iche nke na-akpali (anyị na-eji na adjective euphemistically ebe a) ụgbọ, mgbe ahụ nwere a lee anya na anyị na ndepụta nke ihe ndị kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe na ebe-ahụ na ya – na ma eleghị anya igwu n'ime ma ọ bụrụ na ị na-enwe ọchịchọ ịmata ma ọ bụ obi ike.
The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe: Schwarzenauer
Echiche nke nri mere nke ọbara na-eme ka anyị ozugbo eche nke Scottish nri ọdịnala nke Haggis. A savory pudding nwere atụrụ si ghota (obi, imeju, na akpa ume); minced na yabasị, oatmeal, suet, ngwa nri, na nnu, weere na ngwaahịa, na esie ya na mgbe omenala encased na anụmanụ ahụ afo. Ya mere, echiche nke ọbara ofe bụghị pụrụ iche Germany, ma Schwarzsauer, na ya savory flavor, bụ.
Mere na nza nke ezi ọbara (ma ọ bụ nwa pudding), ọgazị giblets, na mmanya, nakwa dị ka cinnamon, cloves, peppercorns, na ndị ọzọ na ngwa nri, a ọpụrụiche si n'ebe ugwu Germany bụ stof nke vegan nrọ ọjọọ.
The ozi ọma bụ na otu hearty nnukwu efere nke Schwarzsauer ga-elekọta gị protein mkpa n'ihi na ike nke ụbọchị. The ọjọọ ozi ọma bụ na ike flavor (na okpukpo) abụghị ihe na-arịọ ndị ha na mmadụ nile na.
Nke a bụ a efere ị ga-ahụ na obodo nri ahịa ma ọ bụ omenala na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ebe a bụ otu Cafe anyị hụrụ na-eje ozi ya, Cafe Black Sauer otú lelee ya!
The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe: Filmjolk
Filmjolk makwaara dị ka fil, bụ omenala fermented mmiri ara ehi ngwaahịa si Sweden, na a nkịtị Mmiri ara ehi ngwaahịa n'ime Nordic mba. Ọ na-mere site na fermenting mmiri ara ehi na a dịgasị iche iche nke bacteria si umu Lactococcus lactis na Leuconostoc mesenteroides. The bacteria ịgbari lactose, na sugar ndammana dị na mmiri ara ehi, n'ime lactic acid nke pụtara ndị na-lactose anabataghi nwere ike ịnabata ya mma karịa ndị ọzọ na mmiri ara ehi na ngwaahịa. The acid enye filmjolk a utoojoo uto na-akpata na-edozi na mmiri ara ehi, tumadi casein, ka coagulate, otú ndim ikpeazụ ngwaahịa. The bacteria na-na-emepụta a ole na ole nke diacetyl, a compound na a buttery flavor, nke na-enye filmjolk ya e ji mara uto.
Anyị na-kpam kpam na ere na nke a, ma ị jụrụ n'ihi The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe, abụghị tastiest 😆
The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe: ọzụzụ atụrụ Hove
Mgbe ị na-eche nke a Scandinavian Christmas, scrumptious cinnamon kuki na gravdlax wee pulite na-uche. Ihe i nwere ike na-eche nke bụ smalahove. (nkwado onwe unu) A torched ma sie nwa-aturu isi na-ewe mpako nke ebe ke Christmas nri abalị. Esonyere poteto, abụba na gwere Swede. Onye ọ bụla bụ kechioma na-agbalị a efere, nwere obi ụtọ nke chowing ala na fattiest ibe n'ibe mbụ - na anya, ntị, na asụsụ ọ bụrụ na ọ gụnyere - tupu scooping na ike nke isi na a ngaji. Ọ bụ - Adịkwa Christmas!
The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe: azụ asa
Ka anyị kwụsị a oyi na a tastier dee, anyị a ga-aga? Ọtụtụ ndị mmadụ mara banyere Danish butter kuki (smakager), na liquorice (licorice), ma ihe banyere ndị ọzọ nri, na-goodies?
Azụ asa bụ nnọọ ewu ewu bụ Denmark! Ọ na-eresị smoked, curried, etinyeghị, ma ọ bụ dị ka Sol N'ime Gudhjem. Ọ bụ a mmasị karịsịa na Danish n'àgwàetiti Bornholm. 'Sol n'elu Gudhjem'. Sụgharịrị dị ka 'anyanwụ n'elu Gudhjem' – a obodo na Bornholm. Bụ a buttered mpempe rye nri. Topped na azụ asa, red eyịm, na egg nkochi ime akwa. Azụ ọzọ dị ka salmon, plaice, na okporoko na-eri na dressings dị ka pasili ihendori na poteto.
Na-ọnụ gị atọ maka The kasị akpali nri amaala na-agbalị na Europe? AKWỤKWỌ gị ọzọ njem na-enyemaka nke Save A Train !
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteresting-local-food-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)